အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိထားသောနေရာများမှ လေကြောင်းပျံသန်းမှုများအပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံက အရေးပေါ်တားမြစ်ပေးရန် ဒေလီ ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ အင်ဒီယာဂန္ဒီ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ အပြည့်ဝတ်ဆင်ထားသော ခရီးသည်နှစ်ဦးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နယူးဒေလီ၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် COVID-19 မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်အသစ် အိုမီခရွန် (Omicron) ကူးစက်ခံရသောနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်း ပျံသန်းမှုများအား ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် နယူးဒေလီမြို့တော် ဝန်ကြီးချုပ် Arvind Kejriwal က နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်၌ တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“နိုင်ငံများစွာက အိုမီခရွန် ကူးစက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေ လေကြောင်းခရီးဝင်ရောက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ထားလိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့က ဘာလို့နှောင့်နှေးနေရတာလဲ။ ပထမလှိုင်းတုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပလေကြောင်းပျံသန်းမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့နှောင့်နှေးခဲ့တယ်” ဟု ၎င်းက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးခြင်းအပေါ် အိန္ဒိယ အစိုးရကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်၌ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေအများဆုံး ဒေလီကိုလာကြတယ်။ ဒေလီက ရောဂါကူးစက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်နေတယ်” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုလျက် လေကြောင်းပျံသန်းမှု ပိတ်ပင်ရေး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒြာမိုဒီအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အသစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ် အလွန်မြင့်မားကြောင်းနှင့် အသစ်တွေ့ရှိထားသော မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားသည့် ပြင်းထန်သော အကျိုးဆက်များလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချန်ဒီဂါမြို့တွင် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူတစ်ဦးထံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသူ ၂ ဦး၌ ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ နမူနာများအား မျိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုအတွက် ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အား Kejriwal က မျှဝေထားသည်။
ထို့ပြင် Kejriwal သည် မိုဒီထံသို့ အိုမီခရွန် ကူးစက်မှုရှိသော နိုင်ငံများမှ “လေကြောင်းခရီးစဉ်များအား ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်” တိုက်တွန်းကြောင်း စာတစ်စောင်ကိုလည်း သီတင်းပတ်ကုန်က ရေးသားခဲ့သည်။
“ဒီကိစ္စမှာ တစ်စုံတစ်ရာနှောင့်နှေးမှုဟာ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူတစ်ဦးဦး အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက စာထဲတွင် ရေးသားထားသည်။
ထို့ပြင် Kejriwal သည် နယူးဒေလီမြို့တော်တွင် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ခြိမ်းခြောက်မှုအတွင်း ဆေးရုံများ၏ ပြင်ဆင်မှုကို သုံးသပ်ရေးအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မဟာရက်ရှ်ထရာပြည်နယ် အစိုးရကလည်း ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တွေ့ရှိရာ နေရာများမှ လေကြောင်းခရီးစဉ်များအား ဆိုင်းငံ့ရေး အစိုးရကို တောင်းဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း အိန္ဒိယမီဒီယာသတင်းများက ပြောကြားထားသည်။ (Xinhua)
Delhi chief minister urges India’s immediate ban on flights from Omicron variant affected areas
2021-11-30 15:47:25 Category：Politics, Law
NEW DELHI, Nov. 30 (Xinhua) — Chief Minister of the Indian capital city Arvind Kejriwal on Tuesday urged the federal government of India to immediately ban international flights from countries affected by the new Omicron variant of COVID-19.
He questioned the Indian government over its delay in this regard inapost on social media, writing: “Many countries have stopped incoming flights from Omicron-affected countries. Why are we delaying? Even in the first wave, we had delayed stopping foreign flights.”
“Most of the foreign flights come to Delhi, Delhi is the most affected,” he noted and asked Indian Prime Minister Narendra Modi to put the ban in place immediately.
On Monday, the World Health Organization (WHO) said the new variant posesavery high global risk and could have severe consequences where there are surges in cases with the newly found variant.
Kejriwal also sharedalocal news report thatareturnee from South Africa tested positive for COVID-19 in the northern Chandigarh city, and two contacts of the case were found infected, with their samples to be sent for genome sequencing.
Over the weekend Kejriwal also wrotealetter to Modi, urging him to “immediately stop flights” from the Omicron-affected countries.
“Any delay in this regard may prove harmful if any affected person enters India,” he said in the letter.
Meanwhile, Kejriwal is scheduled to be atameeting on Tuesday to review preparedness of hospitals in the capital New Delhi over threat of the Omicron variant.
Indian media reports said the Maharashtra state government has also decided to request the federal government to suspend flights from areas where the new variant has been reported. Enditem
Photo: Two passengers with full protective suits are seen at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi, India, May 25, 2020. (Photo by Partha Sarkar/Xinhua)